के सेक्सले मोटाइन्छ ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सार्वजनिक स्थलमा भद्दा मजाक नगर्न गृहको निर्देशन
संक्रमित घरमा, आइसोलेसन रित्तै
के सेक्सले मोटाइन्छ ?
मेरो लाइफस्टाइल	|| 29 December, 2021
विवाहपश्चात् प्रायः मानिसको तौल बढ्ने गर्दछ । विवाहपछिको ३ देखि ६ महिनामा मोटोपनको महशुस पनि गर्नुभएकै छ होला । स्तनको आकार बढ्नुका साथै गुप्तांगमा फरकपन पाउनुभएको होला । बिहेपछि कतिपय साथीभाइले मोटाएको जिस्काउने गर्छन्, तर, के साँच्चिकै सेक्सले नै तौल बढेको हो त ?
– सेक्सले नै तौल बढेको हो भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो । सेक्स र तौलको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । सेक्स आफैँमा एउटा व्यायाम हो । यसले क्यालोरी घटाउँछ । तर, विवाहपश्चात् सेक्स हर्मोेन असन्तुलित हुने गर्छ, जसले गर्दा तौल बढ्छ ।
– विवाहपश्चात् खानपान, सुत्ने–उठ्ने समयलगायत दैनिकी जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ । यसले हर्मोन असन्तुलन गराउँदा मोटोपन बढ्छ ।
– एक अनुसन्धानका अनुसार विवाहपछि पुरुष मोटाउनुमा फिमेल सेक्स हर्मोन (एस्ट्रोजेन) मुख्य कारक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
– फिमेल हर्मोनको तुलनामा पुरुषहरूको शुक्राणुहरू कम हुन्छ । जब फिमेल सेक्स हर्मोनको सम्पर्क हुन्छ, यसमा एस्ट्रोजोनको मात्रा बढ्छ । पुरुषमा मोटोपन बढ्न थाल्छ ।
– विवाहपश्चात् जोडी सन्तुष्ट हुन्छन् । सन्तुष्टि र चिन्ताले जाँगर घट्ने कारणले पनि मोटोपना बढेको हुन सक्छ ।
कुन उमेरसमूहका मानिसले कति घन्टा सुत्ने ?
महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा सुरक्षित ?
यसरी पाउनुहोस् लभ बाइट्सबाट छुटकारा - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] सेक्सका बेला जोडीले एक अर्कालाई गरिने चुम्बनबाट शरीरमा बस्ने दागलाई ‘लभ बाइट्स’ भनिन्छ । प्रायः जोडीलाई रफ सेक्स मन पर्छ । सेक्सका बेला पार्टनरप्रति थोरै हिंस्रक हुन्छन् । भावुक चुम्बन र फोर प्लेको निसान विशेषगरी, घाँटी वरपरको नरम छालामा बस्छ । सो दाग हट्न हप्ता दिन लाग्छ । लभ बाइटको दाग हटाउन वा घटाउन यी तरिका अपनाउन सकिन्छ । […]
बिहीबार (१३ माघ) तनहुँका ३९ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ८७ जनाको परीक्षण गरिएकोमा ४४.८२ प्रतिशतलाई कोरोना पुष्टि भएको
केही वर्षअघि, महिलाहरूको यौन आचरणबारे एक सर्वेक्षण गरिएको थियो । जुन सर्वेक्षणमा महिलाहरू मादकपदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्न
नेपालमा बिहीबारसम्म कोरोनाभाइरसविरुद्धको तीन करोडभन्दा बढी डोज खोप लगाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार अपराह्र दिएको जानकारीअनुसार तीन